तपाईं आँखाको दृष्टि बढाउनका लागि उपायहरू खोज्दै हुनुहुन्छ ?
आँखा कमजोर छन् भने त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि सरल र प्राकृतिक अभ्यासको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंले चश्मा प्रयोग नगरिकनै दृष्टि बढाउन सक्नुहुन्छ ।
आँखाको मालिश गर्नुस् । माझी औंलो र चोर औंलोले मालिश गर्नुहोला । मालिश गर्दा हल्का मात्र दबाब दिनुहोला ।
कोभिसिल्डको विकल्पमा यी दुई खोप, नेपालले गर्‍यो पत्राचार